နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘင်းမ်စတက်အဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်အာ? - Yangon Media Group
တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်းမ်စတက်အဖွဲ့အကြား ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ဘင်းမ်စတက်အဖွဲ့၏ အနာဂတ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဦးကျော်တင် တက်ရောက် ခဲ့သည်။
လယ်ဝေးမြို့ ကမ္ဘောဇဘဏ်မှငွေထုတ်ယူပြီး ဆိုင်ကယ်စီးလာသည့် အမျိုးသမီးကို နောက်မှ ဆိုင်ကယ်သမာ?
ရန်ကုန်စည်ပင်နယ်နိမိတ်ပြင်ပ ၁၂ မြို့နယ်တွင် အသေးစားစက်မှုဇုန်များ ထူထောင်မည်၊ မြေရှင်များ?
ကျပ်တစ်သောင်းတန် ငွေစက္ကူအတု သုံးစွဲမိသူများကို အရေးယူ ဖမ်းဆီးခြင်းထက် မည်သည့်နေရာမှ ထွက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံဖြင့် မဲဆွယ်ခြင်းသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းဟု ပြည်ခိုင်?